Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka oo Madaxda Galmudug kula kulmay Cadaado[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka oo Madaxda Galmudug kula kulmay Cadaado[Sawirro]
CADAADO – Xildhibaano ka tirsan Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka oo Cadaado u tagay dhexdhexaadinta Madaxda Galmudug ayaa la kulmay Madaxda maamulka Galmudug ee uu khilaafku ka dhex taagan yahay.
Xildhibaanada ayaa la kulmay Madaxweyne Axmed Ducaalle Xaaf,waxayna kala hadleen sidii xal looga gaari lahaa khilaafka saameeyey mas’uuliyiinta maamulka isla markaana wadahadal loogu dhameyn lahaa khilaafka taagan.
Waxaa Xildhibaanadan hoggaaminaya Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Aqalka sare Abshir Bukhaari ayna kamid yihiin Xildhibaano toboneeyo gaaraya kuwaasoo maanta kasoo ambabaxay magaalada Muqdisho.
Sidoo kale Xildhibaanada ayaa kulan la qaatay Madaxweyne Kuxigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabey iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Cali Gacal Casir,waxayna kala hadleen xal u helida khilaafka taagan.
Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii Xildhibaano ka tirsan Galmudug ay sheegeen in ay xilka ka qaadeen Madaxweyne Xaaf,iyadoo Warsaxaafadeed kasoo baxay Xafiiska Wasiir dowlaha Wasaaradda Arrimaha gudaha Federaalka lagu taageeray go’aanka Xildhibaanada Galmudug.
Madaxweyne Xaaf oo warbaahinta la hadlay ayaa beeniyey in xilka laga qaaday,wuxuuna sheegay in toban Xildhibaan oo meel isugu timid aanay xilka ka qaadi karin,isla markaana Dastuurka Galmudug dhigayo in muddo lix bilood mooshin laga keeni karin Madaxweynaha maadaama uu uu isaga xafiiska joogo kaliya 4 bilood.